आजको दिन देखि यी सात उपाय अपनाउनु होस् ल`क्ष्मीको कृ`पा तपाईं माथी रहिरहने छ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/आजको दिन देखि यी सात उपाय अपनाउनु होस् ल`क्ष्मीको कृ`पा तपाईं माथी रहिरहने छ !!
आषाढ शुक्ल पक्षकाे एकाद`शीका दिन विशेषगरी यी उपाय अपनाउन सकियो भने मन चाहे ईक्षा पूर्णहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।हरिशयनी अर्थात आजका दिन देखि चार महिनाका लागि भगवान् विष्णु पाताललाेकमा निवास गर्ने दिनलाई हरिशयनी एकादशी व्रत भनेर भ`निएको हाे ।
चाैमासा सुरुहुने र सकिने अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्षमा पर्ने हरि बाेधनी एका`दशीकाे विशेष महत्व रहने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।यदि यसदिन सामान्य कुरामा ध्यान दिन सकियाे भने शुभफलमा वृद्धि हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
१ प्रात: कालमा स्नान गरिसके पछि भगवान् विष्णुकाे प्रतिमालाई पहेलो पिता`म्बरी वस्त्रले सिङ्गार गरेर पुजा गरेमा सम्पूर्ण मनाेकामना सिद्ध हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२ आजका दिनदेखि यदि दाहिने शंखकाे पुजा तथा दायाँवर्ती शंखबाट भगवान् विष्णुलाई जल चढाएमा ल`क्ष्मिकाे कृपा सदैब रहिरहने शास्त्रमा वर्णन गरेको छ ।
३ आजकाे दिन यदि भगवान् विष्णु`लाई खीर या पहेंलो वस्तुकाे भाेग लगाएमा सन्तानबाट सुखहुने र उत्तम सन्तान प्राप्ति हुने उल्लेख गरिएको छ ।
४ धनलाभकाे कामना सहित आजकादिन माता लक्ष्मीकाे पुजा तथा आरधना गरेमा धनसम्पत्तिमा वृद्धि हुनुका साथै ऋणबाट पनि मुक्ति मिल्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
५ आजका दिन यदि तुलसीकाे नजिक शुद्ध गाईको घ्यूमा दियाे बालेर साझकाे समयमा प्राथर्ना गरेमा समस्त राेगबाट छुट्कारा प्राप्त गर्नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
६ आजका दिन यदि गाईकाे दुधमा काचाे सिन्धुर मिसाएर अभिषेक गरेमा सत्रुबाधा हट्ने वताई`एकाे छ । आजका दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मीलाई साैभाग्य सामान अर्पण गरेमा मनचाहे मानिससंग विवाह सम्पन्न हुने तथा कमजाेर सम्बन्ध पुन राम्राे हुने उल्लेख गरिएको छ ।
७ आज देखि हरेक दिन चाैमास भरि साझमा तुलसीमठमा दियाे बालेर बिहान जल चढाएमा समस्त दुखकष्ट हट्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।